Dad ku dhintay Hoobiyeyaal lagu garaacay Degmooyinka Warta Nabadda iyo Boondheere oo u dhaw Villa Somaliya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dad ku dhintay Hoobiyeyaal lagu garaacay Degmooyinka Warta Nabadda iyo Boondheere...
Dad ku dhintay Hoobiyeyaal lagu garaacay Degmooyinka Warta Nabadda iyo Boondheere oo u dhaw Villa Somaliya
Wararka ka degmooyinka Boondheere iyo Warta Nabada ee Gobolka Banaadir ayaa sheegaya in ay jiraan qasare ka dhashay Hoobiyayaal lagu garaacay halkaas goor dhawayd Balse Bartilmaameedka ahaa Villa Somaliya.
Madaafiicdan ayaa ku dhacay agagaarka Madaxtooyada sida suuqii hore Wardhiigley, Safaaradii hore ee Jarmalka iyo xarumo kale. Waxaa sidoo kale Hoobiyeyaal ku dhaceen qeybo ka mida degmada Boondheere oo saaran Madaxtooyada.
Sidoo kale Xaafadaha hoobiyeyaasha lagu garacay ayaa aad ugu dhow madaxtooyada Villa Somalia, mana jirto illaa hadda cid sheegatay mas’uuliyadda weerarkaan loo adeegsaday madaafiicda.
Previous articleSomalida ku Nool USA oo soo dhawaysay Xukunka dacwadda ka dhanka ah Derek Chauvin oo ah Askarigii dilay Goerge Floyd
Next articleXildhibaan Odowaa oo Qoor Qoor ku tilmaamay shaqsi ku fashilmay xaalada Galmudug
hogaamiyihii hore ee Liibiya, Mucamar Qadaafi oo Noqday Hogaamiye ay illaaladiisa...